अब पोइ चाहियो भन्ने गीत आउँदैनः कोमल वली « News of Nepal
अब पोइ चाहियो भन्ने गीत आउँदैनः कोमल वली
भेट्न खोज्नेबित्तिकै गायिका कोमल वलीको मुखबाट निस्कियो, ‘कहिले विवाह गर्नुहुन्छ भन्ने सोध्ने त होला नि?’
शुरुमै तर्किएकी वलीलाई सञ्चारकर्मीले त्यो कुरा सोधेनन्। बरु गायिका वलीले चतुर्याइँपूर्वक आपैmलेै कुरा उठाइन् ‘मेरो अब पोइ चाहियो भन्ने गीतचाहिँ आउँदैन। अरू गीत त आउँछ।’
गायन र सञ्चारकर्म छोडेर राजनीतिमा होमिएकी वलीको दैनिकी फेरिएको छ। आफ्नो पार्टी, नेपाल र विदेशको राजनीतिक अवस्था अध्ययन गर्नमा वली व्यस्त छिन्। भन्छिन्– ‘अहिले पार्टी र देशको राजनीति बुझ्नमा समय खर्चेको छु। भनौं जग बलियो बनाउने प्रयासमा लागेको छु।’ यद्यपि, वलीले बिहान केही समय कसरत र गीत गाउन छोडेकी छैनन् रे।
नायिका थापाप्रति लक्षित गर्दै वलीले थपिन्– ‘राप्रपाको सिद्धान्त मन पर्छ। यही पार्टीको झण्डा ओढेर मर्न चाहन्छु भन्ने त अर्कोतिर लागेका छन्। म पनि पार्टीले संघीयताको पक्षमा कुरा गर्दा भड्किन सक्छु। नेपालमा प्रदेश चाहिँदैन।’
पत्रकारिता गर्दा र गीत गाउन गाउँगाउँमा जाँदा देखिएको वस्तुस्थिति र समस्यालाई समाधान गर्न राजनीति गर्नुपर्छ भनेर लागेको गायिका वलीको भनाइ थियो। लामो समय रेडियो नेपालमा काम गरेकी वलीले हरेक वर्षजसो तीजमा भगवान् शिवलाई जोडेर निकाल्ने गीतले चर्चा पाउने गर्दथ्यो। पछिल्लो पटक भने वलीले चाहिएन पोइ, म बाँच्ने देशकै लागि हो गीत गाएर राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरेकी छिन्।
गत असार १४ को स्थानीय निकायको चुनावमा दाङको तुलसीपुर नगरपालिकाको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी वलीलाई ‘सिनियर’ले चान्स दिएनन्। तपाईं लडे पनि हार्ने रहेछ है? भन्ने प्रश्नमा वलीले भनिन्– ‘नेपालगन्जमा डा. धवल शमशेर राणालाई व्यक्ति हेरेर यहाँका बासिन्दाले जिताएको जसरी मलाई पनि जिताउँथे कि?’ उनले लामो हात हाल्ने र पद खोज्ने आफ्नो बानी नरहेको बताइन्। वलीले आगामी संघ र प्रदेशको चुनावमा पार्टीले जहाँबाट टिकट दिन्छ, त्यहींबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइन्। ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको’ भन्ने थेगोजस्तो हो कि भन्दा वली मुस्कुराइन् मात्र।
वलीलाई ठूला पार्टीले अफर गरेका थिए रे। संघीयता चाहिँदैन भन्दै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने वलीलाई यही मुद्दा बोकेको राप्रपा नै ठीक लाग्यो रे। ‘आत्मसन्तुष्टि हुने ठाउँमा बस्नुपर्छ। अहिले म राप्रपामा सन्तुष्ट छु, वलीको भनाइ थियो– ‘सानो पार्टी भए पनि उसले लिएको आदर्श र सिद्धान्त ठीक छ।’
वलीभन्दा केही समयपछि राप्रपामा प्रवेश गरेकी नायिका रेखा थापा पशुपति शमशेर राणाको खेमातिर लागेकी छन्। पार्टी फुट्दा वलीको भने चित्त दुखेको छ। नायिका थापाप्रति लक्षित गर्दै वलीले थपिन्– ‘राप्रपाको सिद्धान्त मन पर्छ। यही पार्टीको झण्डा ओढेर मर्न चाहन्छु भन्ने त अर्कोतिर लागेका छन्। म पनि पार्टीले संघीयताको पक्षमा कुरा गर्दा भड्किन सक्छु। नेपालमा प्रदेश चाहिँदैन।’
पार्टी एकीकरण भएपछि हिन्दू राष्ट्र निर्माणको अभियानमा मजबुत भएको महसुस गरेको राप्रपा फेरि विभाजन भएपछि यतिबेला अध्यक्ष थापासँगै आफू पनि संगठन बलियो बनाउन जिल्ला दौडाहामा निस्किएको उनले बताइन्। ध्यपश्चिमाञ्चलस्तरीय स्थानीय निकायका प्रमुखको भेलालाई सम्बोधन गर्न वली नेपालगन्ज आएकी थिइन्।
प्रियंका पारिश्रमिकसँगै मुनाफा लिनेमा बलिउडमै पहिलो
करातेका थर्ड डनसँग अनुको रोमान्स
बोल्ड सिनले शुरूमै तनाव